Madaxweynaha Iran oo sheegay in mareykanka uu dhumiyay saaxiib... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Iran oo sheegay in mareykanka uu dhumiyay saaxiibada uu ku lahaa caalamka
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in mareykanka uu wajahayo waqti madow oo gudaha iyo dibada markii ugu horeysay taariikhda,uuna lumiyay taageerada uu ka heystay dalalka saaxiibada la ah.
Isaga oo ka hadlayay kulan ayaa maanta yeesheen golaha wasiirada ayaa waxaa uu tibaaxay in siyaasada mareykanka ee xiligan ay tahay mid ay hareysay muran ayna la daala dhaceyso dowlada haysa talada.
Waxaa uu sheegay in cilmi baarayaal iyo qabiiro u dhashay mareykanka xitaa ay qabaan arintaan waxaana uu tibaaxay in maamulka aqalka cad ka arimiyay uu yahay mid gumeysi galiyay siyaaasada mareykanka.
Hogaamiyaha Iran ayaa dhanka kale sheegay in dowladaha xulufada la ah mareykanka aysan taageersaneyn siyaasad ahaan,halka qaarkood ay bilaabeen in ay ka fogaadaan.
Ugu danbeyn madaxweynaha Iran ayaa sheegay in siyaasada xun ee mareykanka uu dhex maquuranayo waqtigan ay keentay in aysan tixgalin siyaasadiisa,hey,ada dhaqan iyo waxbarashada ee UNESCO, Hey,ada tamarta caalamiga ah ee atoomikada ee (IAEA) iyo maxkamada danbiyada dagaalka aduunka ee ICC.
Kan-xigaMucaaradka suuriya oo lagu eedeyay in...
Kan-horeSawiro:dad uu soo ritay cudurka daacu...
46,614,073 unique visits